imanoela fifaliana · Aogositra 2017 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Aogositra, 2017
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Aogositra, 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Aogositra 2017
[...] Nanomboka nanendry mpitoraka blaogy toniziana maro samihafa ho filohanà departemanta izy [...]
Tao Anatin'ireo Faharavàn'ny “Tanàna Haolo” Ao Abkhazia Atsinanana, Mitohy ny Fiainana
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Aogositra 2017
"Tsy haiko izay hitranga, fa hamboly korzety aloha isika"
Sri Lanka: Tsy Resahana Intsony Ny Fizahantany Mamoafady
Azia Atsimo03 Aogositra 2017
" Ny olana iray izay manohy mandona ny saina sy mamotika taranaka manontolo foana ve tsy ampy ho atao hoe olan'ny firenena?''
Bangladesh: Afaka Manavotra ny Firenena Ve Ny Herin'ny iray?
Azia Atsimo02 Aogositra 2017
Lohahevitra mafàna ao Bangladesh ankehitriny ny fanambaran'i Dr. Muhammad Yunus, ilay nahazo loka Nobel, ny fikasàny hanomboka antoko politika sy hirotsaka amin'ny fifidianana manaraka.
Topimaso Farany An'ilay Tranobe Fotsy ao Phnom Penh Nanamarika an'i Kambodza Mialohan'ny Fandravàna Azy
Fikasàn'ny fanjakana Kambodziana ny hanorina tranobe maroasa eo amin'ny tany nipetrahan'ilay Tranobe Fotsy manamarika ao an-drenivohitra.
Manasongadina ny fomba namalian'ny mponina ao aminà trano fiahiana ireo olona manana fahasembanana an'ilay famonoana faobe lehibe indrindra tao Japana taorian'ny Ady Lehibe II ity lahatsary ity.
Palestina: Ireo “Mpandeha Lavitra Hoan'ny Fahalalahana” Mihantsy ny Fanavakavahana Anaty Fiara Fitateram-bahoaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Aogositra 2017
Ny 15 Novambra, andiana Palestiniana mpikatroka no voasambotra raha iny nandeha tanaty fiara fitateram-bahoaka nitatitra israeliana mpanjanaka iny. Miantso ny tenany hoe “The Freedom Riders” (Ireo Mpandeha Lavitra Hoan'ny fahalalahana) ireo mpikatroka ireo, hevitra nalaina avy amin'ireo amerikana mafana fo mpiaro ireo zo sivily tamin'ny taona 1961
Amerika Latina01 Aogositra 2017
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2007) Tonga tao Santiago, Shily ilay ”Goaibe Kely” Frantsay malaza. Vahoaka maro no nivory hijery azy io tao afovoan'ny renivohitra. Mampiditra antsika amin'ilay fotokevitra i Claudia (ES): Cuenta la historia de un rinoceronte que escapó de África, pasando por las minas del cobre y llegando a la...
Ny Fitepon'i Polonina: Lalao Karatra Bingo Ho An'ny Fahasalamana, Fandraràna ny Alikaola, Kisoa Mena
Eoropa Afovoany & Atsinanana01 Aogositra 2017
tsy mitondra any amin'ny fanapahankevitra hendry foana ny traikefa, hoy i beatroot.